I-JFK ichaze. Ezinye iincwadi zinomfanekiso wakhe ngasemva | Uncwadi lwangoku
Zilungile chaza amaxwebhu malunga nokubulawa kuka UJohn Fitzgerald Kennedy, JFK. Iincwadi ezininzi zibhaliwe malunga nowona mongameli ubalaseleyo kwimbali yaseMelika. Siyazibona namhlanje Izihloko ezingama-5 kunye nomlingiswa wakhe njenge-protagonist okanye ngasemva, esayinwe ngala magama mathathu awaziwayo entatheli UFilipu Shenon nababhali UStephen King noJames Ellroy. Amanqaku amathathu okujonga, ezembali nezobuntatheli, iintsomi nezesayensi malunga nomnye wabalinganiswa ababaluleke kakhulu kule nkulungwane yama-XNUMX.
1 Ityala le-JFK livulekile-uPhilip Shenon
2 22/11/63 - uStephen King
3 I-American Trilogy-uJames Ellroy
3.2 Abathandathu bamagrats
3.3 Igazi elinamandla
Ityala leJFK livulekile -Philip Shenon
UFilipu Shenon yintatheli ephandayo del The New York Times eWashington, apho asebenze khona ukusukela ngo-1981. Kwakuse ntwasahlobo ka-2008 eyathi yakhala ifowuni yakhe ngenye imini kwivenkile yakhe yephephandaba. Wayeligqwetha elibalulekileyo nelilungu lodumo Ikhomishini yeWarren ngubani owaphanda ukubulawa kukaJFK. Indoda leyo yamcela ukuba axelele ukuba yintoni amalungu ekomishini ayaziyo ukuba ngubani osaphilayo.
Ke intatheli iqale umsebenzi weminyaka emihlanu yakha kwakhona imbali efihliweyo Olunye lolona phando lubalulekileyo nolunempikiswano ngesiganeko senkulungwane edlulileyo. Kodwa le ncwadi yayithetha lukhulu ngakumbi. UShenon wafumanisa ukuba inyani malunga nokubulawa kukaKennedy yayingekachazwa, kwaye baninzi ubungqina babufihliwe okanye bonakaliswa yi-CIA, i-FBI kunye nabanye abantu abanamandla eWashington.
Isuka amakhulu-ndlebe kunye nokufikelela kula malungu aseleyo eKhomishini yaseWarren kunye nabanye abaphambili, uShenon wakha Phantse iakhawunti ecacileyo yokubulawa kukaJFK kunye nophando olungaphumelelanga. Sikwafumana amanani aziwayo elo xesha anje UJacqueline Kennedy noRobert Kennedy, uJ. Edgar Hoover okanye uLyndon B. Johnson.
22 / 11 / 63 - uStephen King
Wayengakwazi njani ukuba nobuganga ngeJFK inkosi engenakuphikiswa yoyikiso kwaye ngaphezu kokuzala UStephen King? Ke ngo-2012 ndapapasha le ncwadi inebali le- Jake epping, Utitshala wesiNgesi kwidolophana encinci eMaine. Ngenye imini omnye wabafundi bakhe abadala, UHarry Dunning, bhala isincoko esinempembelelo kuwe. Umxholo ocetywayo wawusithi "Ubomi bam buTshintshile uBomi bam" kwaye uDunning ubalise ngento eyenzekileyo ngobusuku utata wakhe afike ekhaya enxilile kwaye wabetha wabulala umama wakhe, umntakwabo kunye nodadewabo. Wakwazi ukuzisindisa.
Kungekudala emva koko, uAl, umhlobo kaJake, ufumanisa imfihlo enkulu: kwivenkile yakhe yokutyela anayo umnyango okhokelela kunyaka we-1958. UAl ucela uJake ukuba abuye ngexesha lokudibana msebenziOko kukuthi, ukunqanda ukubulawa kukaKennedy.
Ngoko ke, UJake uya ngo-1958 ukuqala ubomi obutsha ngesazisi esitsha kwaye ulinde kude kube ngu-1963. Kwaye kuyakumnika ixesha lokuba athandane nethala leencwadi elihle. USadie dunhill, Njonga i U-Lee Harvey Oswald kunye nosapho lomfundi wakhe uHarry Dunning ukunqanda intlekele yakhe. UJake uyazi ukuba yimizuzu emibini kuphela eya kudlula kwihlabathi lakhe xa ebuya. Kodwa umbuzo kukwazi loluphi olunye utshintsho iya kucaphukisa izenzo zakho kwaye ukuba uza kukwazi shiya umfazi wobomi bakhe ngasemva ngaphambili.
I-Trilogy yaseMelika -UJames Ellroy
UJack Kennedy wayengumfanekiso weentsomi kwiphepha elinencindi ngokukodwa kwimbali yethu. Wayephethe i-accent yeklasi kwaye wayenxibe iinwele ngokungafani nenye. […] UJack wagwintwa ngelona xesha lilungileyo ukuqinisekisa ubungcwele kunye nobuxoki buqhubeka bujikeleza kwilangatye lakhe laphakade. Lixesha lokuba ukhuphe umchamo wakhe kwaye uchaze amadoda ambalwa abenegalelo ekuphakameni kwakhe kwaye aququzelele ukuwa kwakhe.
Oko kuyabhala UJames ellroy ekuqaleni America, isihloko sokuqala sale nto trilogy ebalulekileyo wonke umntu onomdla kwelo xesha kunye nomfanekiso oqaqambileyo wabalinganiswa bakhe. Inkqubo ye- Inja ekrwada, inkosi yenoveli ekrelekrele kunye nobundlobongela, wabhala le trilogy ngaphandle kwemvume. Ewe kwifayile yakho ye- isitayile esithile nesiyodwa ngokuthe ngqo, ngokukrakra, ngetelegraphic, ngobundlobongela nangobunzima.
Iziganeko ezibaliweyo kule trilogy ziqala ngo-1958 zaphela ngo-1972. U-Ellroy usebenzisa intsomi kodwa ukwenzeka Umxube ongagungqiswanga weziganeko zembali kunye nabalinganiswa bokwenyani kunye nabaqanjiweyo abo angabaqwalaseliyo. Imbali kunye nenoveli emnyama idityaniswa kulo msebenzi mkhulu kangaka, unzima kodwa unamandla kwaye uyaphazamisa.
Singaphakathi 1958 kwaye sine isakhiwo esiqhelekileyo sokubalisa amabali kunye ne-trio ye-protagonists. UPete bondurant, UPete omkhulu, a quebecquois olwandle lwangaphambili, iphoyisa elikhohlakeleyo, umphangi kaWoward Hughes kunye nombulali we-mobster Mickey Cohen. Ehle UKemper boyd, Iarhente yeFBI, isidanga somthetho kunye nentombazana ekholejini. Y UWadi J. Littell, ingcali kwezonxibelelwano ze-FBI, kunye nentombi, umfazi wangaphambili, iingxaki zotywala, kunye nobugwala kodwa ethembekileyo.
La madoda mathathu aya kuwela ubomi bawo kumfanekiso omnyama ka-Ellroy waloo minyaka ka Amayelenqe ezopolitiko, urhwaphilizo lwamapolisa, ingxaki yaseCuba kunye neengxabano zobuhlanga yonke indlela eya kwiintsuku eziphambi kokubulawa kukaJFK.
Apha silapha 1963 kwaye abalinganiswa abaphambili basekhona UPete Bondurant kunye noWard J. Littell. Ngabo kuvela elinye iarhente yeFBI, UWayne Tedrow Jr., ene $ 6.000 epokothweni yakhe efika eDallas ukuza kubulala uWendell Durfee, umdlali omnyama otyholwa ngokudlwengula nokubulala. Ngoku ibali eliyintsomi lixubana nenyani apho babekhona UBobby Kennedy okanye uMalcom X. Iimbambano zobuhlanga ziyaqhubeka kwaye Ku Klux Klan. Ukongeza, sahamba sidlula Las Vegas okanye eVietnam kwi umzobo owothusayo ukusuka kwiminyaka yama-60.
Isihloko sesithathu sele sisibeka kuyo 1968. UMartin Luther King noRobert Kennedy basweleke. Kwaye ngoku UWayne Tedrow Jr. Ungumthengisi we-heroin, wakha i-mafia yokudlala i-mecca, kwaye uya esiba krakra kwizimvo zakhe. Ngaye bawela UDon cructhfield, umcuphi wabucala, kwaye Dwight intsingiselo yesinti, enye iarhente kunye no-Ed Edho Hoover umgulukudu othe phithi ngumfazi, uJoan Rosen, abambiza ngokuba Uthikazikazi obomvu kwaye kuyinjongo yabo bobathathu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » I-JFK ichaze. Ezinye iincwadi zinomfanekiso wakhe ngasemva